Mivarotra amin'ny Amazon Europe - Propars E-Export
Ny fitantanana fivarotana Amazon Europe dia mora amin'ny Propars!
Manomboha mivarotra ny vokatrao any amin'ny firenena 5 amin'ny Amazon Europe amin'ny tsindry bokotra iray!
Mora ny mivarotra amin'ny Amazon Europe miaraka amin'ny Propars!
Azonao atao ny mivarotra ny vokatra ampidinao amin'ny Propars amin'ny Amazon Europe amin'ny tsindry tokana.
Ny baiko avy any Amazon Europe dia angonina amin'ny efijery iray ihany miaraka amin'ny baiko hafa rehetra.
Nahoana ny olona no mividy ahy rehefa avy nanokatra fivarotana amin'ny Amazon?
"Aleo amidy amin'ny Amazon
Ny fahamendrehan'ny marika Amazon izany fa tsy ny fivarotanao."
Blog Propars: Nahoana aho no tokony hivarotra entana 15 amin'ny Amazon?
Andao àry hanomboka
Manatevin-daharana an'i Amazon manerantany amin'ny tapany voalohan'ny taona 2020
isan'ny mpivarotra 651.000. Androany koa 3.145, isan'ora 131, mpivarotra 2 isa-minitra
midika hoe. Amazon amin'ny tahan'ny antonony ankehitriny
Mpivarotra 1.1 tapitrisa mandray anjara isan-taona.
Amidy amin'ny Amazon Europe
Ny fanombohana e-export sy fivarotana amin'izao tontolo izao amin'ny Internet no fahatakarana ara-barotra vaovao amin'ny vanim-potoanantsika. Amin'izao zava-misy izao; Amazon dia manolotra fahafahana manokana ho an'ireo orinasa mitady hivarotra any Eoropa. Ny sehatra e-varotra lehibe indrindra eran-tany, Amazon, no mpitarika ny tsenan'ny e-varotra Eoropeana.
Ambonin'izany, ity dingana ity dia tena mora amin'ny lafiny rehetra, mifanohitra amin'izay mety ho eritreretina. Miaraka amin'ny fisoratana anarana hetra any Torkia, afaka manokatra fivarotana any Amazon Europe ianao ary mivarotra amin'ny kaonty tokana any amin'ny firenena rehetra misy an'i Amazon any Eoropa. Afaka mahazo tombony amin'ny rafitra mandroso ianao amin'ny sehatra toy ny serivisy fandoavam-bola sy entana.
Mpanjifa mety ho 700+ tapitrisa sy taham-panakalozana mahasoa
Ny e-varotra dia ampahany amin'ny fiainan'ny tsirairay any Eoropa izay misy mponina maherin'ny 700 tapitrisa. Ambonin'izany, avo dia avo ihany koa ny fironana hanao fiantsenana miampita sisintany. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa iray manana fivarotana any Amazon Europe dia manana fahafahana hivarotra amin'i Eoropa manontolo. Ankoatr'izay, azonao atao ny mampitombo ny tombom-barotrao amin'ny alàlan'ny fanaovana ny varotrao mihoatra ny euro sy ny tahan'ny fifanakalozana sterling. Fantaro ny mpanjifa bebe kokoa sy ny varotra mahasoa kokoa amin'ny varotrao amin'ny tahan'ny fifanakalozana vahiny!
Manomboka mivarotra amin'ny Amazon Europe miaraka amin'ny Propars
Tena mora izao ny fanondranana elektronika any Eropa miaraka amin'ny fampidirana Amazon Propars! Ireto misy tombony sasany amin'ny fampiasana Propars;
Azonao atao ny mivarotra ny vokatra nafindranao amin'ny tontonana Propars amin'ny ampahany, manerana an'i Eoropa amin'ny tsindry tokana.
Ny vokatra tehirizinao amin'ny teny tiorka dia adika ho azy amin'ny fitenin'ny firenena hamidy.
Ny tahiry dia arahina ho azy ao amin'ny rafitra Propars. Rehefa manao varotra ianao dia havaozina ho azy ny tahiry ao amin'ny fivarotany.
Azonao atao ny mijery sy mitantana ny baikonao manerana an'i Eoropa amin'ny efijery mitovy amin'ny fivarotanao hafa.
Afaka mahazo fanohanana avy amin'ny ekipan'ny Propars ianao amin'ny firafitry ny doka fototra izay hanafaingana ny fizotran'ny varotra.
Miaraka amin'ny Propars, azonao atao ny misafidy ny safidy fandefasana sahaza indrindra amin'ny fandefasanao iraisam-pirenena. Raha te hampiasa ny rafitra FBA ianao dia afaka mahazo fanohanana maimaim-poana amin'io lafiny io.
Raha nanapa-kevitra ny hivarotra amin'ny Amazon Europe ianao nefa tsy fantatrao ny fomba hanombohana dia aza manahy! Ny ekipan'ny Propars dia mitantana ny fizotry ny fananganana tranombarotrao amin'ny anaranao.
Ny hany ataonao dia ny manatona ny ekipan'ny Propars ary manomana ny antontan-taratasy takiana. Raha mbola manohy manomana ny fivarotana ianao dia ho mavitrika amin'ny anaranao ny fivarotanao.
Afaka mifandray aminay izao ianao hivarotra manerana an'i Eoropa!